Chelsea oo u gudubtay wareega Siddeeda tartanka FA Cup kaddib markii ay ka soo adkaatay kooxda Barnsley… +SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo u gudubtay wareega Siddeeda tartanka FA Cup kaddib markii ay ka soo adkaatay kooxda Barnsley… +SAWIRRO
(England) 12 Feb 2021. Chelsea ayaa u gudubtay wareega Siddeed dhamaadka ee tartanka FA Cup kaddib markii ay ka soo adkaatay kooxda Barnsley oo ay ku booqatay Oakwell Stadium, kulankii wareega shanaad ee tartanka FA Cup-ka.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Barnsley iyo Chelsea ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 64-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Tammy Abraham, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Reece James.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-1 ay kaga adkaatay Chelsea kooxda Barnsley oo ay ku booqatay garoonka Oakwell Stadium, kulankii wareega shanaad ee tartanka FA Cup-ka, Blues ayaana u gudubtay wareega xiga tartankan ee siddeed dhamaadka.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barnsley iyo Chelsea ee tartanka FA Cup oo la shaaciyey
Muxuu Thomas Tuchel ka yiri guushii ay Chelsea ka gaartay kooxda Barnsley?